Imvelaphi yase-Afrika yobungxowankulu - i-Afrikhepri Fondation
Imvelaphi yase-Afrika ye-capitalist
AU-boubacry Moussa Lam ubuyela encazelweni okungenzeka ye-W3st, "Thebai", "Thebes", igama elakhiwe kusuka kusibonakaliso se-hieroglyphic sentonga yama-w3s, into ehlotshaniswa neNeterus. Uyaphawula: “Kukhona ukuxhumana phakathi kwenduku ye-w3s nomqondo wokuchuma. Ngempela D. Meeks, ecaphuna uDendera VIII, 30, 9, ukhomba isipelingi se-w3si okuzocaciswa ukuthi kusho ukuthini. Le ncazelo, uma iqinisekisiwe, izofika iphikisana nalokho kwaziwa kangcono kwe-w3si, ukuze izonakalise, iwele ekuweni. Amaqiniso anjalo azosishiya sinamahloni uma ukufana okuthathwe kwabakwaFulani kungasisizanga. (…) Ngokuqondene ne-izimpande Waas-, kungasho ukuchuma noma ukonakalise ukubonga ekuphikisweni okufanele phakathi kwe-aa ne-ii. I-Waasaa ihumusha futhi ihlinzekwe, ichuma, ne-waasiai ngokuncishwa, ichithiwe. (…) Ama-w3s afanekisela okungaphezu kwengcebo esesandleni sawonkulunkulu baseGibhithe noFarao: kubuye kukhiphe amandla nenkazimulo yaphezulu. Futhi lapho sinokuqinisekiswa yizilimi ze-Negro-African. Eqinisweni, bobabili eqenjini leMande nasePulaar, i-wasu isho ukuzikhulula. I-pulaar isinika lapha futhi ithuba lokuthi siphawule ubumnandi obudlulele bokushintshana okukhona phakathi kweGibhithe ne-Afrika yonke. Yilolu limi olusivumela ukuthi siqonde ukuthi kungani izinkomo, umcebo, inkazimulo, zixhunyaniswa ngendlela engalingani. I-Wasorde, ePulaar, indawo evulekile, evame ukutholakala ngemuva kwedolobhana, futhi esebenza njengendawo yokubutha imihlambi.
"Intonga ye-W3s yilabo abasebenza ngokuvame ezandleni zawonkulunkulu namafihara. Ezinye izazi ze-Egyptologists zithathe i-w3s eyinkampani yokushayela ngamamera, okuyinto yocingo lokubamba usuku olubi. Futhi umbhali walesi sizathu sokugcina uyamangala ukuthi onkulunkulu baseGibhithe bangakhetha ukuthi iyinhlangano yesikhethi somsuku. Abankulunkulu baseGibhithe babengaziwa ngokuthanda kwabo ngezinsuku, le nto iyamangalisa "(A. Moussa Lam, The Paths of the Nile, iphe. 127-128).
(…) I-Wasaade, ngolimi olufanayo, inezincazelo ezimbili. Isenzo sichaza izilwane endaweni yokuphumula endaweni echazwe ngenhla. I-Wasaade nayo kuthiwa ngesilwane esondliwe kangcono kunomakhelwane waso ngakho-ke sinonile. ILewasorde yindawo lapho ukuqhathanisa phakathi kwezilwane nemihlambi kungenziwa kalula. Kungakho, ukuqoka umalusi ongcono kunabo bonke bonyaka, yonke imihlambi iqoqelwa ku-wasord noma okulingana nayo. Lokhu kuphakamisa umncintiswano okhetha kakhulu, i-basondiral (evela empandeni efanayo ne-wasu) okungeyona nje into yokuqhathanisa ukukhuluphala ngokweqile kwezilwane yijaji labazazi elenziwe ikakhulukazi ngabelusi bangaphambili. I-Wasu (ibizo) ukuzikhazimulisa ne-waastade (isenzo) ukuzikhazimulisa, ngakho-ke imiqondo emibili ebolekwe ebufundisini. (…) Ngakho-ke yizo zonke lezi zinto, ngokusobala ezikude komunye nomunye kodwa empeleni ezixhumene ngokunengqondo, ukuthi abaseGibhithe bagcwala intonga w3s. Manje sesiqonda kangcono ukuthi kungani kuvame kangaka, ezingeni lokuthwebula izithombe zaseGibhithe, ezandleni zonkulunkulu nofaro. Siyaqonda futhi ukuthi kungani i-W3st enokupelwa kwayo okubandakanya intonga w3s kungasho kalula nje ukuchuma, ukukhazimula, noma kokubili ngasikhathi sinye. Mhlawumbe lena yindawo yokukhomba ukuthi ukufana kwenhlokodolobha enkulu ekhonjwe eFuuta-Tooro kubonakala kuthanda ukuchuma: I-Waasetaake, igama lomunye wemizana ekhonjiwe, ngokwezwi nezwi isho indawo lapho umuntu engakwazi khona angaba mpofu ”(A. Moussa Lam, Les Chemins du Nil, amakhasi 128-130).
Lesi sicaphuno eside nesicebile esivela kumbhali waseSenegal sisinikeza incazelo yokuqala yomqondo wokuthi "capital". Impela, ukuqonda umsuka ongaqinisekile wegama elithi W3st; singabheka i-Greek Thebai. Leli gama, "Thebai", elingenayo i-etymology olimini lwesiGreki, singacabanga ukuthi bekubuye kube yimali mboleko eyenziwe ngolimi lwesiPharaonic ukuqoka idolobha leMinyango Eyikhulu. UMartin Bernal wenza lokhu kuqonda, i-thebaï, kuqhamuke ku-Kemitic db3t noma i-dbt okusho ukuthi, "ibhokisi", "imbiza", "isifuba" . Manje, igama lesiGreki elisho "isifuba", "isitsha" lithi kubas, elakhiwe lisuka empandeni ye-Indo-European root kaput, ekhetha ngokungakhethi "ikhanda", "imbiza", "isitsha". Lokhu kubumbana kwakha "i-haupt" yaseJalimane, "ikhanda" lesiNgisi, futhi kuholele ku-caput yesiLatini, capitalis, okusho ukuthi "okuthile okuhlobene nekhanda".
Uma sibuyela esifundweni sika-A. UMoussa Lam, sifunda ukuthi impande waas- ingasho kokubili ukuchuma nokumosha “sibonga ukuphikisana okufanele phakathi kuka-aa no-ii. I-Waasaa ihunyushwa ngabanikeze kahle, abachumayo, nabakwa-waassii ngokuncishwa, konakala "(A. Moussa Lam, Les Chemins du Nil, p. 129)," impela, kuqhubeka umbhali, uD. Meeks, ecaphuna uDendéra VIII, 30 , 9, kukhombisa isipelingi esithi w3si okusho ukuthi incazelo yayo izochuma. Le ncazelo, uma iqinisekiswa, ingaphikisana naleyo eyaziwa kakhulu nge-w3si, ukuzilimaza yona, iwele ekuweni. (A. Moussa Lam, Les Chemins du Nil, ikhasi 128).
Kodwa-ke, ongxiwankulu baseLatin baveza ncamashi izincazelo ezimbili, njengoba kushiwo “inhlokodolobha” ngokuthile okubandakanya ukufa (ex: isigwebo sentambo) kanye nokuthile okuletha ukuchuma (ex: capitalization). Singaqonda lapha imvelaphi ethile yegama "ubungxiwankulu", kubantu abaningi, elifana nokuchuma nakwabanye okufana nokufa. "Capitulation", "decapitation" anencazelo yokonakala; kukhulunywa ngekhanda kuyo yonke indawo.
Ngenxa yalokhu kubhalelana kokuqala, umuntu angacabanga kahle ngemvelaphi yobungxiwankulu eKemet, esigodini seNayile - ubuNxiwankulu obungaphansi kwemithetho yeMa'at enokholo olubi olungu-42 olwaziwayo futhi olushiwo ngokuphelele emibhalweni engcwele. Bethula izindlela ezahlukahlukene ebudlelwaneni bamadoda nemvelo nakwabanye abantu (ubumbano, ukwamukela izihambi, ubulungiswa, ukubhalwa kobugqila, njll.) Ngaphandle kokulimaza ukuchuma kombuso, okwakukukhulu kakhulu onamandla akakaze akhelwe ngohlanga lwabantu.
Ngokusho kuka-A. Moussa Lam, i-wasorde yePulaar ichaza indawo yokuhlangana yomhlambi. ILa Capitale yindawo yokuhlangana yezinsizakalo ezinkulu zokuphatha, ezezimali nezenkolo zoMbuso. Ubungxiwankulu buqukethe ukunqwabelana kwemali, njengoba nje i-wasorde isetshenziselwa ukuqongelela imfuyo, ukuyihlanganisa kabusha. Igama elithi "Inhlokodolobha" lingukufunda okufundwayo kwengxoxo yakudala yaseFrance, "ifa", "impahla ehambayo ezinkomeni", lapho kuvela khona igama elithi imfuyo. Lapha kuhlanganiswa ukuxhumana nobufundisi bamaKemite; lesi sixhumanisi senza sikwazi ukubona umsuka wayo yonke le mibono namuhla echazwe ngokwanele, yaziswa, futhi yethulwa yimpucuko yaseNtshonalanga njengeyayo; okusobala ukuthi akunjalo, ngoba ubufundisi yilungelo labantu abahlala phansi abenza ezolimo kanye nomakhelwane.
Izikhulu zakwamanye amazwe zifuna ukuhlonipha uMbusi WaseGibhithe Ephezulu Nasezantsi. Umhumushi ukhona phambi kwezihlonishwa zangaphandle. Njalo inkosi, lapha eHoremeb, ikhuluma ngqo ngokuphambene nayo. Lesi siko siqhubeka emibusweni ethile yamaKemite.
Njengoba sibona, i-W3st, i-Capital, i-Head, i-Container (eqoqeka) ikhombisa isimilo esiyingqayizivele saleli dolobha ebeliyisikhungo somhlaba ngempela, "inhloko yomhlaba", igugu le-Guides of the Ubuntu. Inhloko, emasikweni amaKemite, ikhombisa ngempumelelo okushiwo "isikhungo", uNló Dzob, ngokwezwi nezwi "ikhanda lesibhakabhaka", lisetshenziselwa ukuqamba iLanga phakathi kwe-Ekañ. ILanga, njengoRa, libonwa njengesikhungo sendawo yonke. I-W3st, inhlokodolobha ephumelelayo, yaba yi-W3si, iNhlokodolobha eyonakele, lapho inhloko yayo yahlaselwa, yahlukaniswa futhi yahlukunyezwa ngabantu base-Eurasia. Imvelaphi yalokhu kucekeleka phansi kungabonakala esaga samaKemite esithi inhlanzi ihlale ibola ekhanda.
 UMartin Bernal, i-2006, Black Athena. Izimpande ze-Afroasiatic of Civilization, Umq. III: Ubufakazi boLimi, Rutgers University Press, k. 504.
Umlando ongaziwa kumadoda iminyaka eyizinkulungwane eziyikhulu (PDF)
Umhlwanyeli ithemba - Pierre Rabhi (Audio)
INDODA YAMABHIZINISI waseNigrian UKUZE YENZE IMIKHALAZO eyi-10 e-AFRIKA
Uyazi ukuthi iyini inkolo?
Ukuhlaziywa kwesizathu seNegro - Achille Mbembe